RHCSA Ntụle Atụmatụ - Olee otú ị gafere RHCSA nyocha? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
Atụmatụ maka RHCSA nyocha
RHCSA bụ nyocha nke Red Hat Enterprise Linux usoro ihe ọmụma na usoro a na-anwale ndị nwere olileanya maka usoro nhazi usoro. Mgbe ị nwetara asambodo, ị ga-eru eru ịrụ ọrụ na ọnọdụ Red Hat Enterprise Linux. Nanị n'ihu ma chọpụta ihe ole na ole ga-enyere gị aka na RHCSA Asambodo Nyocha.
RHCSA: Uhie okpu akwụkwọ nchịkwa System
Atụmatụ kachasị maka Atụmatụ RHCSA
Nkọgharị maka enweghị ntụpọ: Maka ị gafee ule ọ bụla, omume agaghị ekwe omume. Otú ahụ ka ọnọdụ dị na RHCSA. Ebe ọ bụ na nke a bụ nyocha aka, ị pụghị ịmụta echiche site n'obi. Gbanwee na PC gị ugbu a wee malite ịrụ ọrụ site na ọrụ ọ bụla, naanị na-esote ịkọ ntụziaka. Ọ dị oke mkpa ịmata ihe ị ga-eme n'ezie.
Ọchịchị oge: Ihe nlele ahụ na-emepụta n'ezie ma ị gaghị enwe oge zuru oke nso. Debe ya n'ọrụ gị ma gbalịa ịmechaa ọrụ ndị na-adịghị mkpa na mbụ na ihe mgbaru ọsọ ị ga-emekwu ụfọdụ. Ị nwere ike ịgaziri maka ndị ị chere na ọ bụ nsogbu. Buru n'uche na ị na-agbalịsi ike ka ha buru ụzọ tụọ ụda oge gị n'ụzọ dị otú a na - eme ka ị nwee nchegbu.
Chọpụta ihe ndị a: Ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa zuru ezu, ịnwere ike ịchọpụta akụkụ nke ebe dị mfe. Buru na dika o nwere ike, na ichota ndi siri ike, gi enweghi obi. Buru n'uche udomo oro otu ọnụ ọgụgụ ndị ọkachamara ahụ agbanyela n'eziokwu nke na ha leghaara ịghọta ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Kpuchie ebe nile: E nwere ọtụtụ ihe gbasara isiokwu ndị e tinyere na nyocha ahụ ma ọ nwere ike ị gaghị ama ihe niile. O nwere ike ịbụ na ị jupụtalarị dịka onye nchịkwa usoro ruo ogologo oge ugbu a, ule Ọchịchị Uhie Ọgba Ụgwọ Akwadoro rịọrọ ọzọ. Onye nchịkwa na-elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na ọ gaghị enwe ike na ókèala n'èzí ha. Mgbe ị na-eme atụmatụ maka ule ahụ, chọrọ ntinye iji kpuchie isiokwu ọ bụla ma ghọta mmezi kachasị ọhụrụ.
Isi nchegbu bụ na nyocha ahụ adịghị mfe dịka i chere. Ọrụ ndị a na-eme ka ị rụọ ọrụ ezi omume nke na-achọ ka ị nweta ihe mmụta na ngwa ngwa. Ya mere, dabere na omume n'ozuzu iji mee ka obi sie gị ike na ị gaghị etinye anya n'etiti isiokwu ahụ.